Ogaden News Agency (ONA) – Laba Sarkaal oo booliska Kenya ah oo loo qabtay inay qayb ka ahaayeen afduubkii madaxda ONLF
Laba Sarkaal oo booliska Kenya ah oo loo qabtay inay qayb ka ahaayeen afduubkii madaxda ONLF
Wargayska Standard oo saaka ka soo baxay dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in la qabtay laba sarkaal oo booliska Kenya ah inay lug ku lahaayeen afduubkii loo gaystay mudane Sulub iyo mudane Cali Dheere.
Wargayska ayaa sheegay in Isniintii lasoo xidhay labadan sarkaal ee booliska ah oo loo haysto inay ka qayb qaateen afduubka ka dhacay siduu qoray wargayska banaanka makhaayadda Upper Hill ee Nairobi.
Labada Sarkaal oo kala ah Isbitoore iyo laba alifle ayaa la shaqeeya qaybta dambi baadhista Nairobi, waxaana lagu eedeeyay inay jaajuus u ahaayeen sirdoonka Itobiya.
Ninka xukuma CID qaybta Nairobi Mr. Nicholas Kamwende ayaa u xaqiijiyay wargayska soo qabashada labadaa nin oo sheegay in maxkamadda lasoo taagi doono maalinta Isniinta ah.
“Waxaa lagu soo oogay dambiyo badan oo la xidhiidha afduubka loo gaystay madaxda ONLF’ ayuu yidhi Mr. Kamwende.
Wuxuu intaa raaciyay in labadan sarkaal ay sheegeen markhaatiyaal goobjoog ka ahaa meesha laga afduubay mudane Sulub Axmad iyo mudane Cali Xuseen oo ka mid ahaa buu yidhi kooxda ONLF ee wadahadalka wareegii 3xaad u joogtay Nairobi.
Wargayska ayaa sii qoray in mudane Sulub iyo Cali ay ahaayeen xubno ka tirsan madaxda JWXO lagana afduubay 26kii bisha Jan. duleedka Maqaayadda lagu magacaabo Arabian Cuisine ee ku taala agagaarka Upper Hill.
Ka dib waxaa la saaray gaadhi usii qaaday Itobiya, waxaana loo gacan galiyay sirdoonka Itobiya, ilaa hadana lama garanayo meel ay ku sugan yihiin.
wargayska oo hadalkiisii sii wata ayaa yidhi; madax ka tirsan ONLF oo naga codsaday in aanan magacaabin ayaa sheegay in sirdoonka Itobiya iyo Kenya ay arinta afduubka ku lug leeyihiin.
Waxaa lagu martiqaaday qado maqaayad ku dhow xarunta TSC, halkaasoo nimanka afduubay ay ku sugayeen 3ex baabuur oo meesha taagnaa.
Waxaa gacanta lagu hayaa baabuurtaa midkood oo ahaa Toyota Prado iyo darawalkii waday oo ku xidhan hadda xabsiga booliska ee Turbi, waxaase lala’yahay labadii kale oo loo malaynayo inay xadka ka gudbeen.
Madaxda ONLF oo ka hadlay Nairobi ayaa sheegay in Labadan mudane ee la afduubay ay dawladda Kenya ku martiqaaday inay shirka wadahadalka u yimaadaan, meel ay hadda ku sugan yihiina aan la garanaynin.
“Ma’aha markii ugu horeysay ee arintanoo kale ay dhacdo, sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya inay nabad-galyadanada sugto. Magaran karno meel ay ku dambayn doonaan madaxdaa la afduubay, waxaan ognahay un in Itobiya loo gacan-galiyay”. Sidaa waxaa u sheegay Wargayska Standard xubin ka tirsan ONLF oo codsaday inaan magaciisa la qorin.
Wuxuu wargeyska kusoo gunaanaday in falkan uu wax u dhimi doono wadahadalkii Diblomaasiyadeed ee u socday Itobiya iyo ONLF taasoo ay dawladda Kenya gogosheeda fidisay 2012.